गत साता ३४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार, कुल बजारपूँजीकरण १ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि
माघ १०, काठमाडौं । माघ महीनाको पहिलो साता शेयर बजारमा रू. ३४ अर्ब १६ करोड ५८ लाख ६६ हजारको कारोबार भएको छ । दोस्रो त्रैमासको ब्याजको चटारो सकेका लगानीकर्ताहरुले माघ लागेसँगै बजारमा लगानी बढाउन शुरु गरेका हुन् ।
गत साताको भन्दा यो साता कारोबार रकम रू. ११ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख ५ हजारले बढी भएको छ । गत साता पुस महीनाको अन्तिम साता र चार कारोबार दिन मात्र भएकाले कारोबार रकम कम भएको थियो । गत साता रू. २२ अर्ब ७४ करोड ८२ लाख ६० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यस साता सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको भएको छ । उक्त कम्पनीको यो साता रू. २ अर्ब ३७ करोड ८० लाख ४३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
सातामा ८ करोड ९ लाख २४ हजार ६९९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । गत साता ५ करोड ५४ लाख १२ हजार ६९५ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । शेयर कित्ता गत साताभन्दा यो साता २ करोड ५५ लाख १२ हजार ४ कित्ताले बढेको हो । यो साता प्रभु बैंकको सर्वाधिक कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । प्रभु बैंकको सर्वाधिक ३ हजार ४८ कित्ता शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले जानकारी दिएको छ ।
कारोबार रकम र कारोबार कित्तासँगै यो साता बजारका सबै सूचकहरु बढेका छन् । नेप्से परिसूचक र सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि गत साताकोभन्दा यो साता माथि उक्लिएका छन् । नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव १० अंक माथि उक्लिएर २ हजार ३७४ दशमलव ६४ विन्दुमा र सेन्सेटिभ इन्डेक्स १० दशमलव ३४ अंक माथि उक्लिएर ४३५ दशमलव २५ विन्दुमा पुगेको छ । साताको पाँच कारोबार दिनमा बजार एक दिनमात्र सामान्य अंकले घटेको छ भने बाँकी दिन बढेको छ ।
साताको तेस्रो दिन बजार ५ दशमलव ५७ अंकले घटेको हो । साताको पहिलो दिन २८ दशमलव ४६ अंकले दोस्रो दिन १७ दशमलव ३१ अंकले, चौथो दिन १५ दशमलव ८७ अंकले र पाँचौ दिन ३१ दशमलव ८७ अंकले बजार बढेको छ ।
गत साताभन्दा यो साता लगानीकर्ताको सम्पत्तिको कुल मूल्य (कुल बजार पूँजीकरण) रू. ३१ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड ७० लाख ३५ हजार पुगेको छ । गत साताको अन्तिम दिन यो रकम रू. ३० खर्ब ७९ अर्ब ९३ करोड ६० लाख ६ हजार थियो । यो साता रू. १ खर्ब १० अर्ब २ करोड १० लाख २९ हजारले लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति मूल्य बढेको हो ।
नेपालको शेयर बजारले निरन्तर गति लिदै हाल २ हजार ४०० विन्दु नजिक पुगेको छ । प्राथमिक बजारमा १५ लाखभन्दा बढीको आवेदन र दोस्रो बजारमा चार लाख बढीको सहभागीताले पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता बढ्दै जाने देखिएको छ । संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिदैं बोर्डले बजार सुधारका प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिईरहेको छ ।
धितोपत्र कारोबार राफसाफ चक्र टि प्लस टु मा झार्ने देखि नागरिक स्टक डिलरलाई धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न स्वीकृति समेत पछिल्लो समय बोर्डले दिएको छ । प्रकृयागत रुपमा पूँजीबजार विकासका लागि नियामक निकायहरुले चालेको कदमबाट पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्दै गएको छ ।
४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सर्वाधिक हिस्सा (२ बजेको अपडेट)[२०७७ फागुन, १७]
नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको सर्वाधिक शेयर किनबेच, लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै[२०७७ फागुन, १७]
१८.३१ अंकले बढेको बजारमा चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक वृद्धि (१ बजेको अपडेट)[२०७७ फागुन, १७]
२४७५.६६ विन्दुमा नेप्से, २ अर्ब २० करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री (१२ बजेको अपडेट) [२०७७ फागुन, १७]